Chine Atao filoha mandra-pahafatiny i Xi Jinping
Hitondra fanitsiana ny famerana ny fe-potoam-piasan’ny filoham-pirenena ny parlemanta Sinoa. Izany no nisongadina omaly nandritra ny kabary fanokafana ny fivoriana tao Pekin renivohitra.
Ouagadougou Nisy nanafika ny masoivoho Frantsay
Nandriaka ny ra tao Ouagadougou renivohitr’i Burkina Faso omaly. Olona 7 no maty voatifitra, nahitana mpitandro ny filaminana ary 50 naratra.
Neymar Jr Nody any Brezila hitsabo tena
Tonga omaly vao maraina tany Rio de Janiero – Brezila i Neymar Jr, ilay mpilalao baolina kitra kalaza ao amin’ny PSG. Fotoana fohy taorian’ny nahatongavany dia efa nandray fiaramanidina manokana indray izy saingy tsy fantatra ny toerana nalehany.